Onyinye Sulfachlorpyridazine sodium ntụ ntụ - China NCPCVET
Onyinye Sulfachlorpyridazine sodium ntụ ntụ
AHA: onyinye Sulfachlorpyridazine sodium Powder mejupụtara: 1000g: sulfadiazine sodium 625g + trimethoprim 125g agwa: Ngwaahịa a bụ ìhè edo edo ntụ ntụ. Pharmacological: Ngwaahịa a nwere ike inhibitory mmetụta kasị gram-mma bacteria na-adịghị mma bacteria. Sulfa ọgwụ ọjọọ mwute bacteria ike-uru nke gburugburu folic acid, pụrụ nanị iji p-aminobenzoate na dihydropteridine, ọrụ nke nje dihydrofolate synthase njikọ nke tetrahydrofolate, activat ...
Ngwaahịa a bụ ìhè edo edo ntụ ntụ.
Ngwaahịa a nwere ike inhibitory mmetụta kasị gram-mma bacteria na-adịghị mma bacteria. Sulfa ọgwụ ọjọọ mwute bacteria ike-uru nke gburugburu folic acid, pụrụ nanị iji p-aminobenzoate na dihydropteridine, ọrụ nke nje dihydrofolate synthase njikọ nke tetrahydrofolate, rụọ ọrụ tetrahydrofolate na purine, Thymidine njikọ ekere òkè dị mkpa na nyefe nke a carbon otu. Sulfa ọgwụ ọjọọ na Ọdịdị yiri p-aminobenzoic acid, p-amino benzoic acid nwere ike mpi nje dihydrofolate synthase, igbochi njikọ nke dihydrofolate, n'ikpeazụ, na-emetụta njikọ nke nucleic asịd, mgbochi nke nje na ibu na amụba. Sulfa ọgwụ ọjọọ nwere ike metabolized n'ime p-aminobenzoate ọgwụ ọjọọ ndị dị otú ahụ dị ka procaine, tetracaine adomokoro, na mgbakwunye na abu na anụ ahụ mmebi ngwaahịa nwere ike nye ndị dị mkpa ihe n'ihi na nje na ibu, na sulfa ọgwụ adomokoro.
sulfa antibacterial ọgwụ ọjọọ. N'ihi na anụ ụlọ na okuko Escherichia coli na Pasteurella ọrịa.
Oghom Jeremaya mere:
Tumadi dị nnukwu Jeremaya mere dị ka nfụkasị Jeremaya mere, ala ala Jeremaya mere gosiri dị ka neutropenia, thrombocytopenia, imeju mmebi, akụrụ mebiri na Central ụjọ toxicity. Easily edebe ke mmamịrị, karịsịa mgbe elu doses nke ọgwụ maka a ogologo oge ndị na-enwekarị.
Onunu ogwu ochichi:
na ngwaahịa. Oral: otu ụbọchị, ọ bụla 1kg arọ ahụ, ezi, ọkụkọ 32mg; ezì, ozugbo ọ bụla 5 na 10 ụbọchị; ọkụkọ, ozugbo ọ bụla 3 6 ụbọchị.
(1) Ịtọ hens nkwarụ.
(2) nwere ike ọ gaghị na-eji dị oriri nwekwara ogologo oge ngwa.
(3) mfe ịkpali crystallization na urinary tract, ga-enye a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke anụ ụlọ mmiri ọṅụṅụ. High-dose, ogologo oge ngwa e kwesịrị otu ego nke sodium bicarbonate.
(4) mkpọchị gbasara akụrụ ọrụ, excretion ngwa ngwa, a ga-eji na-ekwesịghị.
(5) nwere ike ime ka nsia osisi, ogologo oge ọgwụ nwere ike ime ka ndị njikọ na absorption nke vitamin B na vitamin K belata, a ga-atụkwasịkwara kwekọrọ ekwekọ vitamin.
(6) ike ga-eji na ọrịa na-asọ ka sulfa ọgwụ ọjọọ.
Ndọrọ ego TIME:
ezi 4 ụbọchị; chicken ụbọchị 2.
Na-atụ aro adị ndụ:
shading, mechiri emechi ichebe.
(2014) Veterinary Drug GMP Certificate Nke 150
Previous: Onyinye Amoxicillin ntụ ntụ
Next: Doxycycline Hyclate soluble ntụ ntụ
Animal antibacterial ọgwụ ọjọọ
antibacterial Drug N'ihi Animal
antibacterial ọgwụ ọjọọ
antibacterial ọgwụ ọjọọ N'ihi Animal
antibacterial N'ihi Animal
antibacterial Suspension N'ihi Ọgwụ
Antiparasitic Drugs N'ihi Veterinary
Dewormer N'ihi Dogs
Deworming N'ihi Nwamba
Dogs Nwamba Pet Dewormer Medicine
Pet Iji disinfectant
okuko Ọgwụ nje
Lincomycin Hydrochloride soluble ntụ ntụ
Ampicillin soluble ntụ ntụ
Albendazole na Ivermectin ntụ ntụ